कुनै मान्छे, ठाउँ वा चिजको नाम जुराउन 'कुण्डली' केलाइन्छ। मौलिक पहिचान उजागर गर्ने र तर्कसंगत लाग्ने नाम नै रोजिन्छ। तर, नेपाली फिल्मलाई चिनाउन अनौपचारिक रूपमा प्रयोग गरिने शब्द 'कलिउड'ले न मौलिक पहिचान नै बोक्छ, न यो तर्कसंगत नै छ।
फिल्म क्षेत्रका धेरैजसो हर्ताकर्ता र फिल्म पत्रकारले यो शब्द हुर्काइरहेका छन्। यही शब्दमा एउटा नेपाली फिल्म पनि बनिसकेको छ। पत्रिका, अवार्ड र कार्यक्रमको नामाकरण नै यस शब्दबाट भइसकेको छ। 'कलिउड' शब्दले के बुझाउँछ त? एकचोटि गुगलमा सर्च गरौँ। कलिउड टाइप गर्‍यौँ भने सबैभन्दा माथि देखिन्छ, तामिल सिनेमा। सर्च रिजल्टमा कलिउड शब्दसँग जोडिएका लिंक एक करोड ६८ लाख वटा रहेको जानकारी आउँछ। अब गुगल इमेजमा कलिउड टाइप गरेर खोजौँ। ठूलठूला वक्षस्थल र ढाड भएका अभिनेत्री तथा जुँगेवाल मोटाघाटा अभिनेताहरूको फोटो बुरुरु प्रकट हुन्छन्। नेपालका राजेश हमाल र रेखा थापाहरूको अत्तोपत्तो छैन त्यहाँ।
पहिचानकै लागि संघर्ष गरिरहेको नेपाली फिल्मले 'कलिउड' शब्द अँगाल्नु सोझै आत्महत्या हो। यो शब्दको विरोध गर्ने फिल्मकर्मीहरू नेपालमा नभएका होइनन्। तर, उनीहरूमध्ये धेरैजसो 'कुनै नाम त चाहियो नि' भन्दै दिमाग खियाइरहेका छन्। कसैले उडमान्डु त कसैले सिनेमान्डु राख्नुपर्‍यो भन्दै सुझाव दिइरहेका छन्। कसैले चाहिँ नेलिउड पनि सुझाएका छन्। के फिल्म उद्योगलाई नाम अपरिहार्य छ त? वास्तवमा छैन। नेपालका डिभिडी पार्लरहरूमा हङकङ, कोरिया, थाइल्यान्डका फिल्म छ्यापछ्याप्ती पाइन्छ। खोइ त? ती फिल्म उद्योगको त कुनै नाम छैन। नेपाली फिल्म उद्योगलाई चिनाउने हो भने कलात्मक रूपमा उपलब्धिमूलक फिल्म बनाउनुपर्‍यो। उद्योगलाई प्रतिष्ठित बनाउने र पहिचान दिलाउने नामले होइन, फिल्मले हो।